क्वारेन्टाइनको समयमा घरमा के गरी दिन बिताउने ? - Ratopress::रातो प्रेस
क्वारेन्टाइनको समयमा घरमा के गरी दिन बिताउने ?
पुष्कर खनाल । क्वारेन्टाइनको बेला के गरि घरमा बस्ने ? दिन काट्न गार्‍हो हुन्छ, त्यसैले मोबाइल खेलाउने, तास खेल्ने रक्सी खाने, केहिन केही उपद्रो त गर्नै पर्छ, अथवा कसैसँग बोल्नु पर्छ, कोहि भएन बोल्ने भने मनमा अनेकौं कुरा सोचेर बस्नु पर्छ, एकछिन पनि त्यतिकै बस्न गार्‍हो हुन्छ, पत्रपत्रिका, मोबाइल, तास लगाएत बिना हामी एकैछिन रहन सक्दैनौं । जीवन त पुरै परजीवी जस्तो भएर बाचेको हामिलाइ पत्तै छैन । मान्छे सत्य सङ कहिले बाच्न चाहेन केहि न केही असत्य रोज्नै पर्छ । हामिले मनमा अनेकौं कुरा खेलाउँछौ, त्यो कुरा खेल्ने मात्र हो पूरा हुनेपनी होइन र सत्य पनि होइन ।
प्रविधिका साधनहरू मोबाइल, रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका आफन्त सबैलाई छाडेर केही समय एक्लै बस्ने प्रयास गर्नुभएको छ ? छैन भने आजै प्रयास गर्नु अनि जिवनको वास्तविक आनन्द आउन सुरु हुन्छ ।
हामीले जीवन जिउन पनि जान्नुपर्छ । जस्को जीवन आनन्दित हुन्छ त्यसैले मात्र आनन्दको जीवन जिउन सक्छ । कस्को आमाबुबाले छोराछोरी लाई दुख दिन चाहान्छ । कस्को छोराछोरीले आमाबुबा लाई दुख दिन चाहान्छ र, कस्को श्रीमतीले श्रीमानलाई दुख दिन चाहान्छ र । सबैलाई सुख दिन चाहान्छ तर भै दिन्छ दुख ।
चाहना त स्वर्गको हुन्छ तर भैदिन्छ नर्क । चाहानाले केही हुदैन निमको रुखमा लाख चाहे पनी आँप फल्दैन, काँडा लाख चाहेपनी फुल हुन सक्दैन । त्यसैले पहिले हजुर आनन्द हुनु अनि आनन्द बाड्न सकिन्छ । आनन्दको झरना हृदयमा उट्नु पर्छ । आफु होउ र अरुलाई सुरक्षित हुन सिका औं । आज देखि ध्यान सुरु गरौं क्वारेन्टाइनको सहि सदुपयोग गरौं ।
दूधसँग माछामासु किन खान हुदैन यस्तोे छ कारण